Anisany nilomano tamin’ny sehatry ny baolina kitra ny Loholona Berthin RANDRIAMIHAINGO. Nambarany fa efa dingana maro no efa vitan’ny federasiona tamin’ny fanatsarana ny taranja baolina kitra Malagasy na dia nisedra fanakianana maro aza. Tsapany fa nisy ny lesoka kanefa ny fanarenana azy ihany no fomba hampandrosoana ity taranja ity. Nanamafy ihany koa izy fa ny fifanomezan-tanana no fomba iray ahafahana manarina ny baolina kitra Malagasy izay nihen-danja.
Ankoatra izany, fanantenana ho an’ny baolina kitra Malagasy ny fahazoan’ny Filohan’ny federasiona Baolina kitra Malagasy, Ahmad ny toeran’ny Filohan’ny CAF. “Tombony ho an’ny taranja baolina kitra ny nandrombahany an’io toerana io. Mino aho fa tsy hanadino ny federasiona ity Filoha vaovao ity fa vao maika aza hikatsaka hatrany ny tombontsoan’ny mpilalao baolina Malagasy ho fampandrosoana ny taranja”, hoy hatrany ny Loholona Berthin RANDRIAMIHAINGO.
‹ TFI: Mitohy ny tolona manoloana ny fibodoana ny Nosy Malagasy sy ny fivarotana tanindrazana.	› ZAH GASY: Tanteraka ve ny adidin’ny fanjakana amin’ny olom-pirenena?